"ဂျပ်စတီနီယံ၊ (ပထမ)" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"ဂျပ်စတီနီယံ၊ (ပထမ)" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
ဂျပ်စတီနီယံ၊ (ပထမ) (ပြင်ဆင်ရန်)
၁၉:၂၆၊ ၁ မေ ၂၀၁၁ ရက်နေ့က မူ
၁၈၈၆ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်
၁၇:၀၁၊ ၂၆ ဧပြီ ၂၀၁၁ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
Ripchip Bot (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
အရေးမကြီး (r2.7.1) (ရိုဘော ပြင်ဆင်နေသည: ar:جستينيان الأول)
၁၉:၂၆၊ ၁ မေ ၂၀၁၁ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
ဂျပ်စတီနီယံ မမွေးခင်ကပင် အနောက်ရောမအင်ပါယာကို ဂျာမန်မျိုးတူစုများက တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးလိုက်သဖြင့် ပျက်စီးသွားခဲ့ရကာ ဂျက်စတီနီယံ စိုးစံရမည့် အရှေ့ရောမအင်ပါယာသာ ကျန်ရှိတော့သည်။ ထို့ကြောင့် ဂျပ်စတီနီယံသည် အနောက်ဖက်မှ လက်လွတ်လိုက်ရသည့် နယ်မြေများကို ပြန်ရနိုင်ရန်၊ [[ရောမအင်ပါယာ]]ကြီးကို တဖန်ပြန်ထူထောင်နိုင်ရန် ကွယ်လွန်ချိန် ရောက်သည်အထိ အချိန်ရှိသ၍ ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း အကျိုး အနည်းငယ်သာ ခံစားခဲ့ရရှာသည်။ အီတလီ၊ မြောက်အာဖရိကနှင့် စပိန်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာ ပြန်လည် ရယူနိုင်ခဲ့သည်။
== Gustinjanu L-Ewwel ta' Bizanzju ==
== ဂျပ်စတီနီယံ ကိုဒဥပဒေ ==
[[File:Justinian code.jpg |thumb|250px|ဂျပ်စတီနီယံကိုဒဥပဒေ]]
Gustinjanu L-Ewwel (bil-Latin: Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus Augustus; Bil-Grieg: Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ἰουστινιανός) (483– it-13 jew l-14 ta' Novembru 565), aktar maghruf bhala Gustinjanu l-Kbir, kien l-Imperatur Ruman Bizantin tal-Lvant mill-527 sal-565. Matul il-hakma tieghu, Gustinjanu ghamel hiltu sabiex iqajjem mill-gdid il-kobor tal-Imperu u sabiex jahand reconquer the lost western half of the classical Roman Empire.
One of the most important figures of Late Antiquity and the last emperor to speak Latin asafirst language, Justinian's rule constitutesadistinct epoch in the history of the Eastern Roman Empire. The impact of his administration extended far beyond the boundaries of his time and domain. Justinian's reign is marked by the ambitious but only partly realized renovatio imperii, or "restoration of the empire". This ambition was expressed by the partial recovery of the territories of the Western Roman Empire. His capable general Belisarius swiftly conquered the Vandal Kingdom in North Africa, extending Roman control to the Atlantic Ocean. Belisarius and general Narses conquered the Ostrogothic Kingdom, restoring Italy and Rome to the empire after being under barbarian control for over halfacentury. The prefect Liberius reclaimed most of southern Iberia, establishing the province of Spania. These campaigns re-established Roman control over the western Mediterranean, increasing the empire's revenue by overamillion solidi. A still more resonant aspect of his legacy was the uniform rewriting of Roman law, the Corpus Juris Civilis, which is still the basis of civil law in many modern states. His reign also markedablossoming of Byzantine culture, and his building programme yielded such masterpieces as the church of Hagia Sophia, which was to be the center of Eastern Orthodox Christianity for many centuries.
ဧကရာဇ်ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်နှစ် ၅၂၈တွင် ဧကရာဇ် ဓမ္မသတ်ကို ပြုစုနိုင်ရန် ကော်မရှင် တရပ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ မူကြမ်းကို ၅၂၉ တွင် ပုံနှိပ်ပြီးနောက် လိုက်နာရန် ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်မှုများ ပြုထားသည့် အတည်ပြုသည့် ဥပဒေကျမ်းကို ၅၃၄ တွင် ပြဋ္ဌာန်းသည်။ ထိုပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ကြေငြာချက်အရ ဤဥပဒေတွင် မပါရှိသည့် ယခင် ဥပဒေများကို ပယ်ဖျက်သည်။
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/82096" မှ ရယူရန်